Fantaro i Tajëëw Beatriz Díaz Robles, mpampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron’ny 18 – 24 marsa · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Tajëëw Beatriz Díaz Robles, mpampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 18 – 24 marsa
Voadika ny 21 Marsa 2019 6:11 GMT
Sary natolotr'i Tajëëw Díaz
Amin'izao taona 2019 izao izahay manasa mpampiatrano maro hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (fahavitrihana ara-piteny) ka hizara ny zava-niainany amin'ny famelomana indray sy ny fampiroboroboana ny tenin-drazan-dry zareo. Ny lahatsoratra etoana miresaka momba an'i Tajëëw Beatriz Díaz Robles (@tajeewdr) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano kaonty azy.
Izaho no Tajëëw Beatriz Díaz Robles, mixe avy any Tlahuitoltepec (Oaxaca, Meksika) aho. Mpikambana avy ao amin'ny Fivondronana Colmix (www.colmix.org), izay mampiroborobo sy mandrafitra hetsika ara-pikarohana, fampielezana, eritreritra momba ny vahoaka Mixe, indrindra fa eo amin'ny fiteny. Mampiasa sehatra nomerika sasantsasany izahay hampielezana ny vaovao, fa liana dia liana ihany koa izahay mahazo torohay avy amin'ireo sehatra mbola tsy vonona hovakiana ny votoaty nomerikany. Manomboka amin'ny fizotra efa misy ao amin'ny faritra misy anay ny asanay. Efa nahavita asa lehibe sy iankinan'ny ambiny hametrahana fototra amin'ny tetikasam-paritra mifantoka amin'ny famakian-teny sy ny fanoratana ny teny ny taranaka teo alohanay.
Noho ny asako dia tsara vintana aho ao anatin'ny komity mpanomana ny fihaonana voalohany amin'ny fahavitrihana nomerika amin'ny fiteny zanatany eto Meksika, izay sehatra nahafahanay nahafantatra tetikasa maro mampiasa ny aterineto sy ireo sehatra hafa hampielezana ny fiteniny ary izany no mandray anjara amin'ny famelomana indray sy amin'ny fampahafantarana. Niteraka fiaraha-miasa fanampiny teo amin'ny samy mpanatrika io fihaonana io.
Amin'izao fotoana izao aho mandrindra tetikasa iray antsoina hoe @EndlessOaxaca mifandraika amin'ny teknolojia, ny rindrambaiko maimaimpoana ary ny fiteny zanatanin'i Oaxaca.
RV: Manao ahoana moa ny toeran'ny fiteninareo ato amin'ny aterineto sy amin'ny andavanandro?
Ahiana hanjavona, tahaka ny fiteny zanatany rehetra ny fiteny mixe. Iray amin'ny antony lehibe indrindra ny fihalemen'ny fampitana eo amin'ny taranaka mifandimby. Ao Tlahuitoltepec (afovoany) fahita mahazatra ny ankizy miteny amin'ny teny espaniola irery ihany, ary mihena ny sehatra ampiasana ny tebt mixe, indrindra ho an'ireo taranaka vaovao. Voafetra ny fidirana amin'ny aterineto, saingy misy pejin'aterineto maro izay mizara votoaty amin'ny fiteny roa Espaniola-Mixe. Na dia tarihana amin'ny teny espaniola aza ny ankamaroan'ny fifandraisana, dia mihamaro ireo mpisera no manoratra amin'ny fiteny Mixe, indrindra rehefa hifananihany.
RV: Lohahevitra manao ahoana no kasainao ifantohana mandritra ny herinandro itantananao ny kaonty twitter @ActLenguas?
Tiako ny mizara mandritra ny herinandro izay heveriko ho fanamby lehibe sasantsasany ho an'ireo olona manokana ny ampaham-potoanany amin'ny fahavitrihana ara-piteny ho an'ny fitenindrazany an-tserasera, sy ireo karazana endrika fiaraha-miasa. Fanasana hisian'ny resaka izany sy fanorenana tetipanorona hiantohana fa afa-maharitra ny tetikasa nomerika ary manana fiantraikany amin'ny mpiteny ilay fiteny.
RV: Inona ireo mampavitrika anao handala ara-nomerika ny fiteninareo? Inona ireo fanantenana sy ireo nofinofinao ho an'ny fiteninareo?
Efa zatra tsara ny ara-nomerika ny taranaka vaovao any amin'ny vondro-piarahamonina afa-miditra aterineto, na dia voafetra aza ny serasera, zava-dehibe ho an'ny satan-dry zareo ny manao izay hahitana ny fiteniny ho hita amin'ireny sehatra ireny. Saingy fitaovana iray ao anatin'ny maro ihany izany, ilaina indrindra ny fahavitrihana nomerika amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny fiteny isan'andro, miteraka sy manamafy ireo sehatra azo ampiasaina ny fiteny.
Tokony ho azo iresahana any amin'izay sehatra misy rehetra sy azo zakaina ny fiteny rehetra manerana izao tontolo izao, na nomerika ny sehatra na azo tsapain-tanana. Ny nofinofiko dia ny mba hanohizan'ny taranaka mandimby miresaka amin'ny fiteniny hatrany ary afa-mahazo fanabeazana amin'io fiteny io. Ary afa-misitraka fiteny maro ry zareo ary tsy misy na dia iray aza ho voahilikilika noho ny fiteny iresahan-dry zareo.